नेपालमा पनि देखियो काे'राेना भा'इरस, ३ जनालाई त्रिभुवन विमानस्थलमै राखियो ! सावधानी अपनाउन सबैलाई आग्रह ! - Hamro Abhiyan
नेपालमा पनि देखियो काे’राेना भा’इरस, ३ जनालाई त्रिभुवन विमानस्थलमै राखियो ! सावधानी अपनाउन सबैलाई आग्रह !
काठमाडौ। नेपालमा पनि काे’राेना भाइ’रसकाे सं’क्रमण भएकाे पुष्टि भएकाे छ । वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक सागर दाहाललगायतले स्वास्थ्य मन्त्रालमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत तीन जनामा याे भा’इरसकाे सं’क्रमण भएकाे पुष्टि गर्नुभएकाे हाे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनबाट नेपाल आएका एक विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षणमा को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण भेटिएको पुष्टि भएको शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार को’रोना भा’इरसबाट सं’क्रमित तीन जनालाई त्रिभुवन विमानस्थलमा राखिएकोे छ।
साथै, टेकु अस्पतालमा निजी अस्पतालबाट रि’फर गरिएका भा’इरस सं’क्रमित बि’रामीको उपचार भैरहको छ । टेकु अस्पताल र पाटन अस्पतालमा छुट्टै कक्ष स्थापना गरी बि’रामीको उपचार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।